Wasaaradda Waxbarashada JSL oo soo saartay Go’aamo hor leh oo khuseeya Dugsiyada Dalka | Somaliland Post
Home News Wasaaradda Waxbarashada JSL oo soo saartay Go’aamo hor leh oo khuseeya Dugsiyada...
Wasaaradda Waxbarashada JSL oo soo saartay Go’aamo hor leh oo khuseeya Dugsiyada Dalka
“Way reebban tahay in dugsiyada dalku ay ardayda shuruud kaga dhigaan bixinta lacagta dugsiga (Fiiga) oo lagu waajibiyo inay waalidku isku mar bixiyaan 2 bilood iyo ka badan; haddii aanu waalidku sidaas doorannin.” – WAR-SAXAAFADEED
Hargeysa (SLpost)- Wasaaradda Waxbarashada iyo Sayniska ee Jamhuuriyadda Somaliland, ayaa soo saartay go’aamo khuseeya nidaamka waxbarashada dugsiyada dowliga ah iyo kuwa gaarka loo leeyahay ee dalka xilligan lagu gudo-jira xaaladda xannuunka Covid-19 oo goobaha waxbarashada la fasaxay.
6. Waa in Waalidka iyo Maamulka Dugsiyadu yeeshaan wadatashi joogto ah oo ku saabsan arrimaha Waxbarashada dugsiga iyo xoojinta xidhiidhkooda, isla markaasna sannadkiiba hal mar la qabto kulanka horumarinta dugsiga oo ay ka soo qayb galaan dhammaan waalidiinta iyo macallimiinta dugsigu.” Sidaas ayaa lagu sheegay war-saxaafadeedka ka soo baxay wasaaradda Waxbarashada iyo Sayniska ee Jamhuuriyadda Somaliland.